healthy benefits – စာမကျြနှာ5– Healthy Life Journal
လီမွန်သီးအကြောင်း သင်မသိသေးလောက်သည့် အချက် ၅ ရပ်
လီမွန်ရည်က အသည်းအဆိပ်အတောက် ကင်းစင်စေပြီး အစာကြေညက်စေပါတယ်။ တစ်နေ့တာကို လီမွန်ရည် တစ်ဖန်ခွက်သောက်ပြီး စတင်ပါ။ လီမွန်သီးတစ်လုံးမှာ တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်စီပမာဏ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ်။ လီမွန်သီးရဲ့ ဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိနဲ့ ဖန်းဂတ်စ်မှိုပိုးသတ်အစွမ်းတွေက ၀က်ခြံကုသရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ၀က်ခြံဖုပေါ်မှာ လီမွန်ရည်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ လီမွန်ရနံ့က...
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပါသည့် လိုင်ကိုပင်းဓာတ်
ခရမ်းချဉ်သီးက ဘာကြောင့်နီနေရတာလဲ၊ သင်္ဘောသီးက ဘာကြောင့် ပန်းရောင်သန်းနေရတာလဲ၊ သင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ သင်္ဘောသီးတွေကို အရောင်လှစေတာက လိုင်ကိုပင်းဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့်ပါ။ လေ့လာမှုတချို့အရ ဒီလိုင်ကိုပင်းဆိုတဲ့ ဖိုင်တိုကမ်မီကယ်လ်က ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လိုင်ကိုပင်းဒြပ်ဟာ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေရဲ့...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကမ္ဘာ့ကင်ဆာအထူးကု ဆရာဝန်တစ်ဦးရေးတဲ့ စာအုပ်အသစ်ထဲမှာ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်မစီးတာ၊ အေးခဲတဲ့သစ်သီး ပြောင်းစားတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်စစ်ဆေးတာ အစရှိတဲ့ သေးငယ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေက သက်ရှည်ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ စစ်ဆေးပါ အ၀တ်အစားအားလုံးချွတ်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို မှန်ထဲမှာ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရမှာ...
တရုတ်နံနံဖျော်ရည် သောက်သင့်သည့် အကြောင်းပြချက် ၁၂ ရပ်
တရုတ်နံနံပင်ကို ဖျော်ရည်အဖြစ် ဖျော်သောက်တာကြောင့် အောက်ပါကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ (၁) ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ (၂) ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျအောင် အားပေးပါတယ်။ (၃) အစာကြေစေပါတယ်။ (၄) လေပွခြင်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ (၅) နှင်းခူနဲ့ ဆိုးရီးယေးစစ်အရေပြားနာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ (၆)...
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကလေးမွေးပြီး မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်တာကြောင့် ဘယ်လိုကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေနိုင်ပါသလဲ။ PP (FB) A. ကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါ ကလေးတွေကို ခြောက်လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်ရပါမယ်။ အမေနို့ရဲ့ ပရိုတင်းမှာ...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သရက်သီးနဲ့ယှဉ်ရင် ဂွေးသီးက ပိုပြီး အရည်ရွှမ်းသလို ကယ်လိုရီပါဝင်မှု ပိုလျော့နည်းကာ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှု ပိုများပါတယ်။ ဂွေးသီးကို အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူလို့ရသလို ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဂွေးသီးမှာ ဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်တွေ...
ပဲသီးစိမ်း၏ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး ၁၀
(၁) အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှု များပါတယ်။ (၂) ဗီတာမင်စီပါဝင်မှု များပါတယ်။ (၃) သံဓာတ်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ပမာဏ ပါဝင်ပါတယ်။ (၄) နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါဝေဒနာတွေမရအောင် နှလုံးကို အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။ (၅) ဆီလီကွန်ပါဝင်လို့ ဆံပင်၊ လက်သည်းခြေသည်း ကျန်းမာစေပါတယ်။ (၆)...
သစ်သီးဝလံတွေကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဘာကြောင့် စားသင့်တာလဲ . . .
စတော်ဘယ်ရီသီး အိုမင်းမှုကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ချယ်ရီသီး အာရုံကြောကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်။ နာနတ်သီး အဆစ်ရောင်နာကို သက်သာစေပါတယ်။ ဖရဲသီး ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပေးပါတယ်။ ပန်းသီး ကူးစက်ပိုးမ၀င်အောင် တွန်းလှန်ပေးပါတယ်။ ငှက်ပျောသီး စွမ်းအင်တိုးစေပါတယ်။ စပျစ်သီး သွေးကြောတွေကို ပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။ ဘလူးဘယ်ရီသီး နှလုံးကျန်းမာ...
(၁) သွေးတိုးကျစေပါတယ်။ (၂) အားနည်းလို့ဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာတွေမရအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ (၃) အသားအရေ ကျန်းမာလှပစေပါတယ်။ (၄) စွမ်းအင်အဆင့် မြင့်တက်စေပါတယ်။ (၅) အစာအိမ်ကျန်းမာစေပါတယ်။ (၆) ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပေးပါတယ်။ (၇) ကြွက်တက်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ (၈) အရက်နာကျဝေဒနာကို...